မဒေါင်းလုပ် IObit Uninstaller မအဘို့ Windows
မပလက်ဖောင်း: Windows မဘာသာစကား: မအင်္ဂလိပ်
မအခမဲ့ မဒေါင်းလုပ် မအဘို့ Windows (24.00 MB)
မဒေါင်းလုပ် IObit Uninstaller,
IObit Uninstaller သည်သင်လိုင်စင်ကုဒ်မလိုပဲသင်အသုံးပြုနိုင်သော uninstaller တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ပရိုဂရမ်များကိုဖယ်ရှားခြင်းများကိုပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေရန်အတွက် Windows PC အသုံးပြုသူများသည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင့်ကွန်ပျူတာရှိမလိုအပ်သောပရိုဂရမ်များနှင့်အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောနှေးကွေးခြင်းနှင့်ပြtroublနာများကိုဖယ်ရှားရန်အတွက် Windows 10 ကိုအသုံးပြုသည်။
IObit Uninstaller ကို download လုပ်ပါ
ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်က program ကိုသုံးတဲ့အခါ Windows ရဲ့ Add / Remove Programs menu မှာမပါတာတွေဒါမှမဟုတ်အဲဒီကနေဖယ်ထုတ်လို့မရတဲ့ပရိုဂရမ်တွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော Windows 8, 8.1, 10 application များကိုအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည်။
ရေရှည် PC အသုံးပြုမှုတွင်ကျန်ရှိသည့်ထောင်နှင့်ချီသောပရိုဂရမ်များနှင့်အပလီကေးရှင်းများသည်ကွန်ပျူတာမှတ်ပုံတင်တွင်စုဆောင်းမိသည်။ ပရိုဂရမ်များကိုစနစ်မှဖယ်ရှားလျှင်ပင်၊ ဤအကြွင်းအကျန်များသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး IObit Uninstaller သည်ထိုကျန်ရှိနေသေးသောပစ်မှတ်များကိုပြproblemနာမရှိပါ၊ ကွန်ပျူတာ၏မလိုအပ်သော ၀ င်ရောက်မှုများမှကာကွယ်ရန်ကွန်ပျူတာ၏မှတ်ပုံတင်ကိုကူညီသည်။
ပရိုဂရမ်ကို uninstall လုပ်ခြင်း (သို့) registry သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကွန်ပျူတာထဲမှာပြproblemနာတစ်စုံတစ်ရာပေါ်လာရင်၊ ဒီပြfromနာများမှပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်ရန် system restore point ကိုအလိုအလျှောက်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ program ကအရမ်းတည်ငြိမ်ပြီးသင်ဒီ function ကိုမလိုအပ်ပါဘူး။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် Windows update များသည်အထူးသဖြင့်ကွန်ပျူတာဟောင်းများတွင်ပြသနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူများသည်ဤ update ကိုဖယ်ရှားလိုပေမည်။ IObit Uninstaller ၏ Windows Update deletion feature ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်သင်၏ PC တွင်ပြproblemsနာဖြစ်စေသည့် updates များကိုသင်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ကူးစက်စေနိုင်ပြီးဖယ်ရှား။ မရသည့်အန္တရာယ်ရှိသော add-ons များကိုဖယ်ရှားရန်ပရိုဂရမ်ကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤ add-ons များအနက်၊ ပင်မစာမျက်နှာကိုပြောင်းလဲစေသော add-ons များမှရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုပြောင်းလဲသောသို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုခိုးယူရန်ကြိုးစားနေသောသင်၏အခြေအနေနှင့်မတူသောအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ အမြန်ဆုံးအဖြစ်။
နောက်ဆုံးပေါ် IObit Uninstaller ဗားရှင်းနှင့်ဘာအသစ်လဲ။
တပ်ဆင်ခြင်း / တပ်ဆင်ခြင်းခြေရာခံခြင်း - ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များ၊ အစီအစဉ်များ၊ DDL ဖိုင်များစသည့်တပ်ဆင်မှုမှတ်တမ်းများပိုမိုတိုးတက်ခဲ့သည်။
Software ကျန်းမာရေး - ပရိုဂရမ်မှကျန်ရှိသောအရာများနှင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ plug-in များကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။
Uninstall Algorithm - အသုံးနည်းသောပရိုဂရမ်များနှင့် bundle programs များအတွက်ပိုမိုတိကျသောအသိအမှတ်ပြုမှု
ဖြုတ်တပ်လို့မရသောဖြုတ်တပ်နိုင်သောပရိုဂရမ်များ - MPC-HC၊ IntelliJ IDEA၊ Rockstar Games စသည့်ခေါင်းမာသော software များကိုဖယ်ထုတ်ပါ။
၎င်းသည်အခမဲ့ရရှိနိုင်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသော interface တစ်ခုပါရှိခြင်းသည်၎င်းသည် uninstallers များကြားတွင်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Windows ၏ standard uninstall program သည်ထိရောက်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိပြီးပိုမိုအစွန်းရောက်သောဖြေရှင်းချက်ကိုသင်ရှာနေပါကသင်၏ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ရှိသင့်သည့် system maintenance application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။
IObit Uninstaller မသတ်မှတ်ချက်များ
မဖိုင်အရွယ်အစား: 24.00 MB
IObit Uninstaller သည်သင်လိုင်စင်ကုဒ်မလိုပဲသင်အသုံးပြုနိုင်သော uninstaller တစ်ခုဖြစ်သည်။...
10AppsManager အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့် Windows 10 တွင်ထည့်သွင်းထားသော Windows Store အက်ပ်များကို ဖျက်၍...
Norton Removal Tool သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထည့်သွင်းထားသော Norton software...
Wise Program Uninstaller သည်အသုံးပြုသူများအားပရိုဂရမ်များကိုဖယ်ထုတ်ရန်ကူညီသည်။ Wise Program...
Total Uninstall သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ program installation...
Display Driver Uninstaller သည်အသုံးပြုသူများအားဂရပ်ဖစ်ကတ်ဒရိုက်ဘာများကိုဖယ်ရှားရန်ကူညီသောအခမဲ့...
ပုံမှန်အားဖြင့် standard uninstallers များသည် registry ဖိုင်များ (သို့) သင်၏ကွန်ပျူတာတွင်သင်...
Ashampoo UnInstaller သည် သင့်ကွန်ပြူတာမှ ဖယ်ရှားရာတွင် ခက်ခဲသော ပရိုဂရမ်များကို ဖယ်ရှားရန်...
မဒေါင်းလုပ် YouTube Download
မဒေါင်းလုပ် Kigo Netflix Video Downloader
မဒေါင်းလုပ် Microsoft Office 2019
မဒေါင်းလုပ် DAEMON Tools Lite
မူပိုင်ခွင့်© 2021, softmedal.com ။ မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။ မSoftmedal သည်အခမဲ့ ကွန်ပျူတာ ဆော့ဝဲ, android APK နှင့်ဂိမ်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ ဒီအခမဲ့ မဒေါင်းလုပ် ပလက်ဖောင်း တွင်လူကြိုက်အများဆုံး android ဂိမ်းများကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။